भित्रि वस्त्र कस्तो र कुन साइजको लगाउने ? यस्ता गल्ति नगर्नुहोस् | सुदुरपश्चिम खबर
भित्रि वस्त्र कस्तो र कुन साइजको लगाउने ? यस्ता गल्ति नगर्नुहोस्
केही महिलाहरुमा सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या पनि हुन्छ । त्यसको कारण गलत साइजको ब्रा लगाउनु हो । गलत साइजको ब्रा लगाउनाले निस्सासिएको महसुस हुन सक्छ र शरीरमा रक्त प्रवाह कम हुन सक्छ ।
गलत फिटिङ भएको ब्राले तपाईंको गर्दन र पछाडिको मांशपेशीहरुलाई सपोर्ट गर्दैन । जसले कांँधको पीडा बढ्छ र त्यसको सोझो असर तपाईंको टाउकोमा पर्छ । अनलाइनखबरबाट